जैक्की श्राँफले अनिल कपूरलाई १७ थप्पड हानेको थिए, तर किन ? « Mazzako Online
जैक्की श्राँफले अनिल कपूरलाई १७ थप्पड हानेको थिए, तर किन ?
बलिउडका पर्दा पछाडीका धेरै घट्नाहरु छन्, जसले तपाईलाई छक्क पार्न सक्छ । यसमध्ये आज हामी जैक्की श्राँफ र अनिल कपूरको एउटा रमाईलो प्रंशग प्रस्तुत गर्दैछौं । जैक्की श्राँफले अनिल कपूर कुनै बेला १७ थप्पड हानेका थिए, तर किन ?
यो प्रशंग १९८९ को हो, जब जैक्की र अनिल फिल्म ‘परिंदा’को सुटिंग गरिरहेका थिए । सिनेमाका डाईरेक्टर थिए विधु बिनोद चोपडा । चलचित्रको एक सिनमा अनिलको गालामा जैक्कीले थप्पड लगाउँनु पर्ने थियो ।
टेक लिईयो, डाईरेक्टरले टेक ओके पनि गरे तर अनिल कपूरलाई यो सिन त्यति नेचुरल लगिरहेको थिएन । त्यसैले, उनले जैक्कीलाई गालामा मज्जाले थप्पड हान्न भने अनि फेरि टेक लिन निर्देशकलाई आग्रह गरे ।
यो चक्करमा जैक्कीले अनिललाई मज्जाले १७ थप्पड हाने, त्यसपछि अनिललाई लाग्यो सिन नेचुरल भयो । १७ थप्पड हान्दा अनिलको गाला त मज्जाले नै सुन्निनु पर्ने हो, तर त्यसो भएन किनभने जैक्कीले त्यति जोरसँग पनि उनलाई गाला तताएनन् । यि दुई मिडियामा हुदाँ त्यो पुरानो दिनको १७ थप्पडको प्रशंग निकालिईरहन्छन् ।
अनिल र जैक्कीले सँगसँगै धेरै चलचित्रमा काम गरेका छन् । ‘अन्दर बहार’, ‘राम लखन’, ‘युद्ध’, ‘१९४२ अ लभ स्टोरी’, ‘कभी कभी’, ‘कर्मा’, ‘रुपकी रानी चोरोका राजा’ लगायत हिट फिल्ममा यि दुई कलाकारले काम गरेका छन् ।